CASTOR OIL ( CHINE CASTOR ) Qalinkii:Eng Mohamed Haibe Hersi | Gabiley News Online
September 23, 2020 - Written by admin
CASTOR OIL ( CHINE CASTOR )
Qalinkii:Eng Mohamed Haibe Hersi
Geedkan shirkada Chinaha ay ku beertay banka wajaale , ayaan rabaa in aan wax ka idhaahdo :
Geedkan magaciisa kale oo la yidhaa saliidii cajiibka, waxa uu ka baxaa cimilada kulul, asal ahaana waxa uu ka yimid afrikada bari.
Abla ablaynta geedaha waxa uu ka mid yahay family loo yaqaano EUPHORBIACEAU. Midhaha geedkani aad bay sun u yahiin, waxaan ku jirta sunta loo yaqaano RICIN, oo kimiko ahaan loo yaqaano CARBOHYDRATE BINDING PROTEIN.
Midhahan caruurtu hadii ay 5 ilaa 6 xabo ka cunaan waxay ku keeni kartaa dhimasho. Dadka waawayna 15 ilaa 20 xabo hadii ay cunaan ayaa sababi karta dhimasho.
Qofku marka uu cuno suntan calaamadaha lagu arko waxaa ka mida, xumad, qufac, hab dhiska neefsashada oo uu dhaawaco. Sunta midhaha waxa lagu baaba’in karaa iyadoo xoog loo karkariyo.
Faa’iidada uu geedkani u lahaa dadkii hore sida faraaciinta iyo hindida waxay saliida midhaha laga tuujiyo u isticmaali jireen inay ku shitaan faynuuska.
Waqtigan xaadirka ah wax yaabo badan ayaa loo isticmaala oo ay ka mid tahay baadhitaan sidii kansarka loogu dawayn lahaa.
Waxa kale oo loo isticmaala saliida lagaga hortago in biraha mishiinku is xoqaan ee loo yaqaan Castrol, waxa kale oo laga sameeya saliid biriiga , khadka, rinjiga, caaga nooca qabawga xaddhaafka aanu waxba yeeli karin.
Gabagabadii, sidii uu sheegay afhayeenkii shirkada shiinahu in Geedkan midhahiisa u qaybinayaan dhamaan beeralayda, waa arin khatarteeda leh, maadama ay midhaha geedka dad iyo xoolaba wixii cunaa ku sumoobayaan, wax qarsoona aanay ahayn, waxa ku waajiba xukuumada in ay geedkan beeraan oo kaliya, cidii aqoon u leh.
Geedkan laguma beeri karo meelkasta, waaba sida qorshaha ugu jirta shirkadaas shinaha ah. Mana aha in ay dawladu ogolaansho siiso .